Xiisadda Ahlu Sunna iyo DF oo meel sare gaartay iyo laba doorasho oo ka dhici karta Dhuusamareeb | Caasimada Online
Home Warar Xiisadda Ahlu Sunna iyo DF oo meel sare gaartay iyo laba doorasho...
Dhuusamareeb (Caasimadda Online) – Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaarayo Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Maamulka Galmudug ayaa sheegaya inay meel sare gaartay xiisadda ka dhex taagan Dowladda Soomaaliya oo dooneysa inay Galmudug u sameyso madaxweyne ay iyada wadato iyo Ahlu Sunna oo dooneysa inay qeyb ka noqto awoodda Galmudug.
Guddiga Doorashada Madaxweynaha Galmudug ee ahaa 8-dii xubnood ee iska dhex doortay Guddoomiye iyo Kuxigeen ayaa waxay soo saareen jadwalka doorashada Madaxweynaha Galmudug iyo kuxigeenkiisa.
Shanta Xildhibaan ee matala Ahlusuna ee ku jiray Guddiga doorashada ayaa dhankooda sheegay inay soo saarayaan jadwal kale oo doorasho, maadaama ay qaadaceen Guddiga la iska dhex doortay oo ay sheegeen inuu soo magacaabay Guddoomiye Gacal.
Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa laga dareemaya dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeedo, waxaana mugdi sii galayo Mustaqbalka Galmudug maadaama madaxweyne Xaaf uu Gaalkacyo ka wado olole doorasho halka haddana ay is khilaafeen Ahlu Sunna iyo Dowladda taasoo ka dhigan inay Galmudug wajihi doonto doorashada 3 madaxweyne lagu dooran doono.
Beesha Caalamka ayaa Dowladda Soomaaliya cadaadis xoogan ku saareyso in la dhiso Galmudug ay qeyb ka tahay Ahlu Sunna, waxaana hadda muuqato inay Dowladda Soomaaliya isticmaaleyso awood iyo inay wax kasta u dhacaan sida ay iyada rabto taasoo ka baxsan Dastuurka Galmudug iyo midka Soomaaliya u yaalo.